09/01/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Sunday, September 01, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Root Call Blocker Pro အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 8 လပိုင်း 31 ရက်နေ့ထွက်လေးပါ
silent & hidden ပါလုပ်ထားနိုင်တော့ သုံးရတာပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့
Google Play Store မှာ $6.99 နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပြီး free ယူချင်ရင်တော့ အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
Android version 2.1 နှင့်အထက်ရှိရမည့်အပြင် ဖုန်းမှာ Root access ပါရှိရပါမယ်
အောင်လံ မြို့နယ် လူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်အား ဗဟိုကော်မရှင်မှ အတည်ပြု စာရင်းထုတ်ပြန်
Posted by drmyochit Sunday, September 01, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
စက်တင်ဘာ ၁၊ အောင်လံ။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ် ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်က အောင်လံမြို့နယ် လူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖြစ် အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးပါသောအဖွဲ့အား သြဂုတ်လ(၃၀)ရက်နေ့ ရက်စွဲ ဖြင့် အတည်ပြု စာရင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အထက်ပါ မြို့နယ် လူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်အား တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်နှင့် မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ ပါတီဝင်များ ညှိုနှိုင်း ဆုံးဖြတ်မှုဖြင့် ဗဟိုကော်မရှင်သို့ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း တိုင်းကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြတ်ကိုက ပြောသည်။
ကော်မရှင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း လူငယ် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ညီလာခံ အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ အဖွဲ့ချုပ်မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို နားလည်ပြီး အဖွဲ့ချုပ်အပါ် သစ္စာ စောင့်သိသူ၊ တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီး နှင့် လူကြီးလူငယ်ကြား နားလည်ပြီး ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သူ စသည်အချက်များဖြင့် ကိုက်ညှိုပြီး ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကာ ရွေးချယ်တာဝန်ပေး အပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းကပင် ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစောပိုင်းကာလများကပင် အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ညီလာခံ များအား သီးခြားကျင်းပမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ(၉)ရက်နေ့က အဖွဲ့ဝင်(၂၄)ဦး ပါဝင်သော ဗဟိုလူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်အား ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ လူငယ်ညီလာခံ တက်ရောက် ရွေးချယ်ခံခွင့်နှင့် မဲပေးခွင့်အား၊ အသက် (၁၆)နှစ်မှ (၃၅)နှစ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားပြီး ညီလာခံများအား ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင် စတင်ကျင်းပ၍ ဇန်န၀ါရီလတွင် တစ်ပြည်လုံး အပြီးကျင်းပနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်းလည်း ဦးမြတ်ကိုကပင် ပြောသည်။
Posted by drmyochit Sunday, September 01, 2013, under သတင်းများ | No comments
အပန်းဖြေနှင့် အလည်အပတ် ခရီးသွားလိုသည့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအတွက် ဆွဲဆောင်မှု အကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းနိုင်ငံများတွင် မြန်မာပါဝင်နေကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Cox & Kings ခရီးသွားအင်စတီကျု၏ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးဟောင်း စေတီပုထိုးများနှင့် အရုဏ်တက် ရှုခင်းအလှကို မိုးပျံပူဖောင်းဖြင့် ပျံသန်းကြည့်ရှုနိုင်မည့် ပုဂံမြို့တော်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ အမွေအနှစ်များစွာဖြင့် သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေသော မော်လမြိုင် ဆိပ်ကမ်းမြို့တော်နှင့် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်း သည့် တောင်ပေါ်ဒေသ ကို နှစ်သက်သူနှင့် တောင်တက် ခရီးသွားလိုသူများအတွက် ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့သို့ ခရီးသွားများ အများဆုံး သွားလေ့ရှိသည်ဟု ယင်းအင်စတီကျု၏ အစီရင်ခံစာပါ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ အများဆုံး သွားရောက် လည်ပတ်သည့်ဒေသနှင့် လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံး ဒေသများကို စာရင်းပြု စု ဖော်ပြထား သည်။
ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် အနားယူလိုသူများသည် ငပလီကမ်းခြေနှင့် အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့် ခရီးသွားလို သူများအတွက် ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်း ခရီးစဉ်တို့သည်လည်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင် လျက် ရှိပြီး နာမည်ကျော် စေတီပုထိုးတစ်ခုဖြစ်သော ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်သည် တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ထူးခြားဆန်း ကြယ်စွာ တည်ရှိနေပုံမှာလည်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား နိုင်ငံခြားသားများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို အစဉ်ရယူ လျက် ရှိကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နွေရာသီ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက် လည်ပတ်လိုသည့် ခရီးသည်ဦးရေလည်း နှစ်စဉ် မြင့်တက်လျက်ရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အဆင့်မြင့် ဇိမ်ခံဟိုတယ်များစွာ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် အလည်အပျော်စီးသင်္ဘောများ စီစဉ်ပေးခြင်း တို့လည်း ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Cox & Kings သည် နှစ်ပေါင်း၂၅၀ ကျော် သက်တမ်းရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဘဏ္ဍနှစ်အကုန်ပိုင်းအထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားသား ဦးရေမှာ ယခင်ရှစ်သိန်းကျော် ရှိလာမှ ၁၀ သိန်းကျော်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနထံ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယင်းဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ ရရှိသော ဝင်ငွေမှာ ၅၃၄ သန်းရှိပြီး ခရီးစဉ်များ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အပန်းဖြေနှင့် အလည်အပတ် ခရီးလာရောက်ကြသူများ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု လွှတ်တော်သို့လွှဲမည်ကို ကေအင်န်ယူ စိုးရိမ်
ရန်ကုန်-တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီးနောက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး မှုများအတွက် လွှတ်တော်သို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်မည်ကို ညီညွတ် သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေဖြင့် စိုးရိမ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ( KNU ) မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒို စောကွယ်ထူးဝင်းက ပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် သြဂုတ် ၃၁ ရက်ကပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော် ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့် တွေ့ဆုံ စဉ် ၎င်းက တင်ပြပြော ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“သမ္မတရဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုထဲမှာ တကယ်လို့ အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ပြီးရင် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အတွက် လွှတ်တော်ကိုလွှဲပြီးတော့ လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကဦးဆောင် လုပ်သွားဖို့။ ကျွန်တော် တို့နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ပြီးတော့ ပြီးသွားပြီလို့လုပ်သွားမှာစိုးရိမ် တယ်” အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် န၀တအစိုးရလက်ထက်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုနှင့် အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများမပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် တိုက်ပွဲများပြန်လည် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
“နိုင်ငံတကာမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အဓိကလုပ်ရတာပဲ။ အစိုးရက တာဝန်ယူပြီး လွှတ်တော် ကပံ့ပိုးပြီးလုပ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ လူပြောင်းရင်ယုံကြည်မှုပြန်တည် ဆောက်ရတယ်” ဟု ပြည်ထောင် စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ဗဟိုဌာနမှ အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦးကပြောသည်။
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုက ရလာမည့်အချက်များအား လွှတ်တော်သို့တင်ပြပြီး တိုင်းရင်းသား များ၏ တောင်း ဆိုချက် များကို ဥပဒေပြုပေးပါက ခိုင်မာမှုရရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် ခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နေပြီး အဆိုပါအဆင့်ပြီးနောက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင်ချမှတ်ရန် စီစဉ် ထားပြီး ထိုအဆင့်ပြီးမှသာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ စတင်မည်ဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက် လာသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ အပြီး အပြတ် ဆွေးနွေးရန် တင်ပြခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနှင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ကိုယ်စား လှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် ( RCSS/SSA ) မှ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
အမျိုး သမီးငယ်များ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ မှုများပြားလာသဖြင့် သုတေသန ပြုလုပ်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း MA- RIE STOPES INTERN- ATIONAL မှ Country Director ဒေါက်တာစစ်နိုင်က အကြံ ပြုပြောကြား လိုက်သည်။
အမျိုးသမီးငယ်များအတွင်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုများပြားလာရ ခြင်းမှာမိဘနှင့် အုပ်ထိန်းသူများ က အမျိုးသမီး ငယ်များအား အ သိပေးသင့်သည့်အကြောင်း အ ရာများကိုအသိမပေးခြင်းနှင့် တစ် ချက်လွှတ် အမိန့်ပေးခြင်း များ ကြောင့် ပိုမိုဖြစ်ပွားလာရခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
''အမျိုးသမီးတွေဟာ အ ကြောင်းကြောင်းကြောင့် သူတို့ လိုချင်တာကို လိုက်ရင်းနဲ့ မလိုချင် တာကို ရကြတယ်။ အဲဒီ အခါမှာ မကိုင်တွယ်မဖြေရှင်းတတ်တာတွေ ရှိတယ်။ လူငယ်အမျိုးသမီးတွေ မှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာအဖြစ် များလာတာက အထူးသဖြင့် သိ သင့်တာတွေကို ပေးမသိဘဲ မျက် စိပိတ်ထားလိုက်တာကြောင့်ပဲ။အဲဒီဒဏ်ကိုခံနေရတာပဲ။ ဘယ် သူတွေမှာ ဘယ်လောက်ထိခိုက် နေပြီလဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုအပ် သလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက် သု တေသနပြုလုပ်ဖို့ လိုနေပါပြီ''ဟု ဒေါက် တာစစ်နိုင်က ပြောသည်။
ထို့ပြင် လူငယ်အမျိုးသမီး များ ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပွားရခြင်း တွင် စိတ်ဓာတ် ကျနေသောကြောင့် ဖြစ် ချင်ရာဖြစ်ဟု ထင်ရာ စိုင်းမိ ခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်မကျသောသူ များတွင်မူ အစစအ ရာရာအောင် မြင်နေသည့် အတွက် မိမိတွင်အ ဆိုးမဖြစ်နိုင်ဟု ပေါ့ပေါ့ဆဆနေ မိခြင်းဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးနှင့် ပတ်သက်မှု ရှိကြောင်း လည်း သိ ရသည်။
''လူကြီးမိဘတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက လူငယ်တွေကိုနေ ရာပေးပြီး ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်။လူငယ်တွေကနေ ဘာတွေ တင် ပြလာလာ၊ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပယ်ချတာတွေ၊ ဆူပူတာတွေမ လုပ်ဘဲ နေရာပေးဖို့လိုတယ်။ မိ ဘတွေအနေနဲ့ ဒေါက်ထောက် ကြည့်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူး။တစေ့တစောင်းပဲ ကြည့်ရမယ်။သူတို့ မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် တွေကိုသူတို့ အမြော်အမြင်ရှိလာ တဲ့အချိန်အထိ သူတို့ကိုယ်သူ တို့ ကျေကျေနပ်နပ်ကာကွယ်အောင် လုပ်ရမယ်''ဟု ယင်းကဆက်လက် အကြံပြုပြောကြားသည်
နွေဦးလင်း ၊သြဂုတ်(၃၁) ရန်ကုန်တိုင်းနေ့စဉ်သတင်းစာ
Posted by drmyochit Sunday, September 01, 2013, under အနုပညာ | No comments
နိုင်ငံတကာအဆင့် အလှမယ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကင်းကွာနေ ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ‘Miss International’ ဟူသော စကားလုံးသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှစ၍ လူပြောများ ရေပန်းစားပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ စကားလုံးတစ်လုံး ဖြစ်လာခဲ့ကာ ယခုအချိန်သည် နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲများသို့ မြန်မာ့အလှမယ်များ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်လာချိန်၊ ယှဉ်ပြိုင်ရန်တာစူနေချိန် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဆက်သွယ်မှုအရပ်ရပ် အပြောင်းအလဲ ရှိလာချိန်တွင် ဖြစ်ထွန်းလာသော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပင်။
socie_mmahmte_01ယင်းလူပြောများလာသော စကားလုံးသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု၍ နန်းခင်ဇေယျာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှ အစပြုခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ချိန်နည်း၊ အတွေ့ အကြုံနည်း အနေ အထား ရှိ နိုင်ငံမှ သွားသော်ငြား ပွဲဦးထွက်လည်းဖြစ်၊ မြန်မာဆိုသော အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် အားပေးမှုများကြောင့် Miss Internet ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး People Choice Award, Ambassador Beauty ခေါင်းစဉ်ဆုများလည်း ရရှိခဲ့သည်။
ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ မင့်စ်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် Miss Supranational ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု၍ Miss Supranational Myanmar ခင်ဝင့်ဝါက လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့၌ ကျင်းပမည့် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကြီးတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု၍ Miss Grand Myanmar ထားထက် ထက်က လည်းကောင်း၊ လာမည့် အောက်တိုဘာလ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် (၅၃) ကြိမ်မြောက် Miss International ပြိုင်ပွဲတွင် Miss Myanmar International ဂုဏ်ရည်အေးကျော်က လည်းကောင်း ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် (၆၁) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော Miss Universe ကမ္ဘာ့ အလှ မယ်ပြိုင်ပွဲကို ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုတွင် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ယင်းကမ္ဘာ့ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံမှ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ပြန်လည် ၍ ခြေ လှမ်းနိုင်တော့ မည် ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့သော ပြိုင်ပွဲများ မတိုင်ခင်က နီးနီးစပ်စပ်ရှိသော ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအဖြစ် Miss ASEAN 2005 ပြိုင်ပွဲတွင် အိရူပါဝင်းက ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းကျွမ်းကျင်စွာ တီးခတ် နိုင်သော စန္ဒရားတူရိယာကို တီးခတ်ပြသ၍ Miss Talent ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
ယင်းသို့ပြိုင်ပွဲများနှင့် ကင်းကွာခဲ့ချိန်၊ မော်ဒယ်လ်ပြိုင်ပွဲများနှင့် မော်ဒယ်လ်များကိုသာ လူငယ်များအဖို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် နေခဲ့ချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ Miss အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်သူတွင် မော်ဒယ်လ်များနှင့် မတူသည့် လိုအပ်ချက်နှင့် အရည်အသွေးများရှိရန် လိုကြောင်းကို စတင်သတိပေးလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် Miss Universe၊ Miss World၊ Miss Earth၊ Miss Supranational၊ Miss International၊ Miss Grand ဟူ၍ပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ယင်းပြိုင်ပွဲများကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုလာသူများနှင့် အဆိုပါပြိုင်ပွဲများကို သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများ ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃ ရှိ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုဖြစ်သော Miss Supranational ပြိုင်ပွဲတွင် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ “ဒီပွဲကိုဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာက ပွဲလုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးကို သဘောကျလို့ပါ။
ပြီးတော့ မနန်းခင်ဇေယျာလိုမျိုး နိုင်ငံတကာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြီး သွားပြိုင်ချင်နေတာ အခုတော့ ဆန္ဒပြည့်ဝသွားပါပြီ။ ညီမမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စလွယ်ကိုလွယ်ထား တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားပါမယ်” ဟု Miss Supranational Myanmar ခင်ဝင့်ဝါက ပြောကြားသည်။
“ကိုယ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ စလွယ်ကိုလွယ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့…”
Miss Supranational Myanmar မခင်ဝင့်ဝါ စံထားသော နန်းခင်ဇေယျာကလည်း ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံ တကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရသည်မှာ မလွယ်ကူကြောင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျစရာများ ကြုံတွေ့နိုင်သောကြောင့် မိမိအသိစိတ်တွင် မြန်မာကိုယ်စားပြု လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို မညှိုးနွမ်းစေရန် အသိတို့ကို ထားစေချင်ကြောင်း၊ မိမိယှဉ်ပြိုင်စဉ်က ပြင်ဆင်ချိန် မရှိသည့်အပြင် တစ်ကိုယ်တည်း သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရကြောင်း စသည်ဖြင့် ၎င်း၏အတွေ့အကြုံများနှင့် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်များကို ပြောပြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မခင်ဝင့်ဝါသည် နိုင်ငံကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ မင့်စ်မြို့သို့ သွားရောက်၍ ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ယင်းပြိုင်ပွဲတွင် အလှမယ် အားလုံးကို မေးခွန်း များမေးမြန်း ၍ အရည်အချင်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ၎င်းမှာ ထိုမေးခွန်း များကို ကောင်းမွန် စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ကာ လက်ရှိတွင် Miss Internet ဆုအတွက် အင်တာနက်မှ vote ပေးသူ အများအပြား ရရှိနေသည်။
Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကျွမ်းဘားမယ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ မထားထက်ထက် သည် ဘာသာ စကားလေးမျိုး တတ်မြောက်ထားပြီး နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုသူတစ်ဦး ဖြစ်လိုသောကြောင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ချိန်တွင် မြန်မာအမျိုးသမီးထုကို ကိုယ်စားပြု ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာ အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှုပုံစံများကို ၎င်းတို့အထင်ကြီး လေးစားစေရန် လုပ်ဆောင်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာက Miss တစ်ယောက်နဲ့ Model တစ်ယောက်ကို အတူတူပဲလို့ မြင်နေတဲ့ အမြင်မှာတွေ ရှိနေပါတယ်။ Miss ဆိုတာက ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ဆောင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ သူလုပ်တဲ့ အပြုအမှုတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ သူတို့နိုင်ငံက ဒီလိုပုံစံနေထိုင်ကြတယ် ဆိုတာကိုအများက မြင်ကြမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် Miss တစ်ယောက်ဟာကိုယ့် နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင် နိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံမှ Miss Supranational နှင့် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲများအတွက် မြန်မာ နိုင်ငံမှ National Director အဖြစ် ဆောင်ရွက်သူ ကိုဟန်ဇော်ထက်က ၎င်း၏အမြင်ကို ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် မထားထက်ထက်သည် ပြိုင်ပွဲတွင် မိမိ၏ အရည် အချင်းကို ကောင်း မွန်စွာ ပြ သနိုင်အောင် မြန်မာ့ တူရိယာတစ်ခု ဖြစ်သော စောင်းကို တီးခတ်၍ ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် အမှား မရှိအောင် ပြင်ဆင်နေပြီး ယခင်ကလည်း ကျွမ်းဘားမယ်တစ်ဦးအဖြစ် နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင် ဖူးသောကြောင့် ကျွမ်း ဘား အားကစားကိုလည်း ထည့်သွင်းပြ သမည်ဖြစ်၍ လေ့ကျင့်မှု များ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ နိုဝ င်ဘာလတွင်မှ ယှဉ်ပြိုင်ရန် သွားရောက်ရ မည် ဖြစ်သောကြောင့် ပြင်ဆင် ချိန်များ ရှိသေး၍ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောဆိုသည်။
ထို့နောက် မိမိတို့ယှဉ်ပြိုင်ရသော ပြိုင်ပွဲသည် နိုင်ငံတကာနှင့် တန်းတူပြိုင်ရမည်ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ သတ်မှတ် ထားသည့် စည်းမျဉ်းအရ ရေကူးဝတ်စုံ (swimsuit) ဝတ်၍ ပြိုင်ရ မည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာ ပရိသတ်များ အနေဖြင့် နားလည်စေချင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေး မှုအရ ထိုသို့ယှဉ်ပြိုင်သည်မှာ ကိုက်ညီမှု မရှိသော်လည်း ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်နိုင်မှသာ နိုင်ငံတကာနှင့်တန်းတူ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်ထောင်စုမယ် ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့ စင်မြင့်ထက်တွင် ရေကူးဝတ်စုံ ဝတ်ဆင် ယှဉ်ပြိုင် ရသော ပြိုင်ပွဲရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင် မြန်မာအလှမယ်များ နိုင်ငံတကာ စင်မြင့်ထက် ရေကူးဝတ်စုံ (two piece) ဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်နေခြင်းကို ပြစ်တင်ပြောဆိုနေသေးသော သဘောထားများ ရှိနေသည်ကို လူမှုကွန် ရက် စာမျက်နှာများတွင် တွေ့မြင်နေရသည်။
“အစ်မသွားပြိုင်တုန်းကလည်း အဲ့ဒီ bikini (ရေကူးဝတ်စုံ) ကိုဝတ်ရမှာ ရှက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ် ကမြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတဲ့ စလွယ်ကိုလွယ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာပါ။ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုပြီးတော့ သီးသန့် အခွင့်အရေးပေးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံးကို တန်းတူပဲလို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ” ဟု Miss Internet 2012 ဆုရှင် နန်းခင်ဇေယျာက ၎င်း၏အတွေ့အကြုံများ ကိုရှင်းပြသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအလှမယ် ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်သော Miss Universe ပွဲကြီးကို လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှမယ်များ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူနေသည်။
အဆို ပါပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများသည် အဓိကမြန်မာဆန်သောသူ ဖြစ်ရမည့်ဖြစ်ပြီး စကားပြော ယဉ်ကျေး ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အရပ်အမြင့်မှာ အနည်းဆုံး ၅ ပေ ၆ လက်မ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အပျိုဖြစ် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ swimsuit ဝတ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာကို ကောင်းမွန်စွာပြော နိုင်ရန် မလိုကြောင်း Miss Myanmar Universe organization တာဝန်ယူထားသော Hello Madam media group ၏ မန်နေဂျာ မဆုမြတ်က ပြောကြားသည်။
Miss Universe ပြိုင်ပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တို့တွင် သုံးကြိမ်ဆက်တိုက် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင် လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုချိန်တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် လာရောက် လျှောက်ထား သူများမှာ ၃၀ ဦးခန့်ရှိပြီး သြဂုတ်လ ကုန် ထိ လျှောက် လွှာတင်နိုင်ကာ စက်တင်ဘာလတွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီး ဆုံး အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ် စားပြု Organizer ပြုလုပ်ခွင့်ရ၍ အတိုင်းမသိ ဝမ်း သာကြောင်း Hello Madam media မှ မန်နေဂျာ မဆုမြတ်က ပြောကြားသည်။
“ဒီပွဲကြီးက ကမ္ဘာ့အလှမယ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အကြီး ဆုံး ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက သွားပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒီပွဲအကြောင်း ကိုလည်း ကြားပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်လည်းသူများနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိင်ငံ ကိုယ်စားပြု သွားပြိုင်ရ မယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထားပြီး သွားပြိုင်စေချင်ပါတယ်” ဟု Miss Grand Myanmar မထားထက်ထက်က ပြောကြားသည်။
အများစုမှာ Miss နှင့် Model ကို ကွဲပြားစွာ မမြင်ကြသေးပါ။ Model ဆိုသည်မှာ အနုပညာအလုပ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသူဟု ဆိုနိုင်ပြီး Miss ဆိုသည်မှာ Miss တစ်ယောက်တွင် ရှိသင့် ရှိထိုက်သော အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံမှ သတ်မှတ်ခြင်းခံရကာ ၎င်း၏ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုဖြင့် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အကျိုးပြုနိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Miss Internet ဆုရှင် နန်းခင်ဇေယျာမှာ ပရဟိတ အလုပ်များစွာကို လုပ်ကိုင်နေပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တွင် အားလပ်သည့် အချိန်များတွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လုပ်အားပေး ကုသိုလ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ၎င်းကို ချစ်မြတ်နိုးသော ပရိသတ်များထံသို့ အသိတရားများ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွင်လည်း သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံထားရပြီး အားကစား တွင်လည်း အကျိုးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။
“Miss ဆိုတာက အဓိက Education ပိုင်းမှာရော၊ Talent အပိုင်းမှာရော ပြည့်စုံနေတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ် ရ ပါမယ်။ Model ဆိုတာက အလှအပပိုင်းဆိုင်ရာကို အဓိကထားပြီးတော့ Show ပွဲတွေလျှောက်ပြီး အနုပညာ အလုပ်မျိုးပဲ လုပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Miss ပြိုင်ပွဲတွေကိုဆိုရင် တော်တော်များများက အနုပ ညာ လောကထဲက မဟုတ်ဘဲနဲ့ အပြင်လောကက အရည်အချင်းပြည့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပြိုင်တာ များတာ ကို တွေ့ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံတကာမှ အလှမယ်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပြိုင်ပွဲ များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်နေသည့် Myanmar Model Management မှ ဒါရိုက်တာ ဦးဌေးမင်း ထွန်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာနည်းတူ ကြီးကျယ်သော Miss ပြိုင်ပွဲများကို မကျင်းပနိုင်သေးသော် လည်း ပြည်ပနိုင်ငံမှ ပြုလုပ်သော ပြိုင်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော အရည်အချင်းများကို ကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ထားသင့်သည်မှာ သေချာလာသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ပြုလုပ်သော Miss ပြိုင်ပွဲများတွင် တင်ဆက်မှုများမှာ ခမ်းနားလှပပြီး ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်တွင် အဆင့်ဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ရ ကာ နိုင်ငံတိုင်းရှိ ပေါ်ထွန်းသော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ချပြကြသည်။ အကဲဖြတ်ဒိုင်များမှာလည်း အမှန်တကယ် အရည်အချင်းရှိသူများသာ ရွေးချယ်ကြသည်ကို ယင်းပြိုင်ပွဲများကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ Miss ပြိုင်ပွဲများကို သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု များ ကို ဖော်ပြနိုင် မည့် အပြင် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိလာနိုင်သည်။ Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲတွင် နန်းခင်ဇေယျာ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားအကဖြစ်သော ရှမ်းရိုးရာအကဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်မည့် Miss Grand Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် မထားထက်ထက်ကလည်း မြန်မာ့ရိုးရာ တူရိယာစောင်းကို တီးခတ်ပြ သမည် ဖြစ် သည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှမယ်များသည် ယခုချိန်တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် တန်းတူ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုစလွယ်ကို လွယ်၍ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်တန်းတူ ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲများသို့ အလှမယ်စေလွှတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ပြုလုပ်လာကြရာတွင် ရုပ်ရည်ချောမောမှုသာမက လုံလောက်စွာ လေ့ကျင့်သွားမှုများ၊ လိုအပ်သော အရည်အသွေးများ စ သည်ဖြင့် ပြည့်စုံသူများ သွားရောက်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးချယ်မှုများ မှန်ကန်ရန်၊ အရည်အသွေးရှိသူများ ယှဉ်ပြိုင် ရန် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိလာစေရန်လည်း လိုအပ်သည်ဟု စိတ်ဝင်စားသူများက သုံးသပ်ကြ ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ အတွေ့အကြုံနှင့် လိုအပ် ချက်များလည်း ရှိနေသေးရာ ပြိုင်ပွဲဝင်များသည်လည်း ထပ်မံကြိုးစားသင့်သည်များကို သတိပြုသင့်သည်သာမက နိုင်ငံသား အချင်းချင်းပေးသည့် Vote အရေအတွက်ကို အာရုံစိုက် အားကိုးမနေရေးကိုလည်း များစွာသတိထားသင့်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ စောင့်ကြည့်အားပေးသူ မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့က သုံးသပ်သတိပေးကြသည်။
From: The Voice Myanmar
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် အချက်အလက်များ မှတ်သားဖွယ်
Posted by drmyochit Sunday, September 01, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
(5) သင့်အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အစာခြေရည်(အက်ဆစ်)ဟာသင်တုန်းဓားကိုတောင် ချေဖျက်နိုင်တဲ့ အထိ ပြင်းအားရှိ ပါတယ်။ အဲဒီအက်ဆစ်ရည်ဟာ အစာအိမ်ကိုတော့ဘာကြောင့်မထိခိုက်စေလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းက - အစာအိမ်နံရံဟာသုံးရက် ဒါမှမဟုတ် လေးရက်တစ်ကြိမ်လောက်ဆဲလ်အ
သစ်တွေ နဲ့ အလိုလိုအစားထိုးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(39) လူ့နှလုံးသာ ပေသုံးဆယ်အမြင့်ထိရောက်အောင် သွေးတွေကိုပန်း ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့
ညှစ်အားရှိပါ တယ်။ ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအချက် ... မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ ... ။
(40) ပြုံးဖို့အတွက်မျက်နှာကြွက်သား(၁၇)ခုအသုံးပြုရပြီး မျက်မှောင်ကြုတ် ဖို့အတွက် (၄၃)ခုအသုံးပြုရ ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ .... လက်တစ်ဖက်လုံးကို မ ပြီးအားနဲ့လွှဲရိုက်လိုက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကြွက်သား(၄)ခုပဲ သုံးစရာလိုပါတယ် တဲ့။ မြှောက်ပေးတယ်လို့မထင်ရင်မလိုလားအပ်ပဲကယ်လိုရီတွေမကုန် ရအောင် အကြံဥာဏ်တစ်ခုလောက်ပေးချင်ပါတယ်။တကယ်လို့များပေါ့...ကိုယ်လုံးဝမနှစ်သက်တဲ့ယောကျာ်းလေး
တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုသိပ် အနှောင့်အယှက်ပေးနေမယ်ဆိုရင် အားနာပါနာနဲ့ လည်းပြန်ပြုံးပြမနေပါနဲ့။ မကြိုက်မနှစ် သက်ကြောင်းလည်းအမူအရာနဲ့မျက်မှောင်ကြုတ်ပြမနေပါနဲ့...။အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့...ကြွက်သားလေး
ခုကိုအသုံးပြုပြီး ..အားရပါးရသာ ... Slap လိုက်ပါ...လို့ ...
(တကယ်တော့ ဒီအချက်အလက်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာအကုန်လုံးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နေ့စဉ်လိုလိုပဲ.. အသစ်အသစ်သောအံ့သြဖွယ် အချက်အလက်တွေကို သိပ္ပံပညာ ရှင်တွေ ယနေ့တိုင်ရှာတွေ့နေ ဆဲပါ။
လုပ်ဆောင်ချက်တော်တော်စုံတဲ့ဆောစ့်ဝဲလ် အလန်း Free Studio
ဒီဆောစ့်ဝဲလ်လေးကတော့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေတော့တော်တော်လေးကိုစုံပါတယ် 73MB ရှိပါတယ်
YouTubeကနေကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေး အလွယ်တကူဒေါင်းလို့ရပါတယ်
သီချင်းတွရုပ်ရှင်တွေကို ကိုယ်ဖုန်းမှာ ကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင် Converter လုပ်လို့ရပါတယ်
ခွေကူးခြင်း ကွန်ပျူတာကို Video Recorder လုပ်ခြင်း
Videoစောင်းနေတာကိုပြန်တည့်ပေးခြင်း စသည်ဖြင့် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
Free ဗားရှင်းဆိုပေမယ့် တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါဘဲ
ဆံပင်ကျွတ်စေသော အကြောင်းရင်းများ မှတ်သားထား
အမျိုးသမီးများမှာ ဆံပင်တွေကျွတ်နှုန်းများလာပြီးဆိုလျှင် မိမိစိတ်ကို နှောင့်ယှက်ဖြစ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဆံပင်တွေကျွတ်လာပြီဆိုလျှင် ခေါင်းကဆံပင်များကိုပင် ဘီးများဖြင့် ဆံပင်လှပမှု့ ကိုပင် မလုပ်ရဲအောင်ပင်ဖြစ်လာကြောင့် တွေ့ ရှိရပါတယ် ။ ဒီလိုဆံပင်တွေကျွတ်လာခြင်းသည့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲခြင်း ၊ သူများကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည် ခေါင်းလိမ်းဆီများကို အသုံးပြု့ မိခြင်း နှင့် အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ ပုံစံတွေပြောင်းလိုက် ကောက်လိုက် ဖြောင့်လိုက် ဆေးအရောင်ပြောင်းလိုက် လုပ်ဆောင်တက်သည့် အချက်တွေပါဝင်ပါသည် ။
မိမိမျိုးရိုးလည်း လိုက်တက်ပါတယ် တစ်ချို့ အသက်ကြီးလာပြီးဆိုလျှင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးပါ ဆံပင်တွေကျဲလာမယ် ပါးလာကြပါတယ် ။တစ်ချို့ ဆိုလျှင် ထိပ်တောင်ပြောင်းသည့်အထိဖြစ်လာပါတယ် ဒါလည်း မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ် ။အဲလိုဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် ဆံခြည်မျှင်အိတ်တွေ အားကောင်းအောင် ဆေးကုသမှုတွေခံယူလုပ်ဆောင်ရပါတယ် ။
မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲမှာ ဟော်မုန်းအမျိုးအစားနှင့် တခြားဓာတုပစ္စည်းအပြောင်အလဲတွေကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။အဓိကအပိုင်းတွေကတော့ သွေးအားနည်းခြင်း ၊ သိုင်းရွိက်ရောဂါ ( သောက်ရသည် ရောင်ခြည်ဆေးများသောက်ရခြင်း ) နှင့် သံဓာတ်ချို့ တဲ့လွန်းသည့် အစားသောက်တွေ စားသုံးခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးအများကို ဆံပင်အများအပြား ကျွတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် ။
တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ သွေးဆုံးချိန်အတောအတွင်း အီစထရိုဂျင် မဟော်မုန်း ပမာဏ ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ ဆံပင် ကျွတ်တာမျိုး၊ ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ ဆံပင်ကျွတ်တာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ် ။
အလှပများကို စိတ်တိုင်းကျ ပြု့ ပြင်ပြောင်းလဲဖန်တည်းသည့် မိန်းကလေးများအခုပြောပြမည့် အပိုင်းကို သတိမထားကြပါဘူး သူများတွေလှတယ် ကောင်းတယ် နာမည်ကြီးတယ်ဆိုပြီး ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ဆံပင်ကို အမျိုးမျိုးသော ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်း ၊ ဆံပင်ပုံသွင်းရာမှာ အသုံးပြု့ သည့် ပစ္စည်းတစ်ချို့ ကြောင့်လည်း ဆံပင်သားကို ထိခိုက်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ် ။ဆံပင်ကို ပိုနီတေးစည်းတာ၊ ကျစ်ဆံမြီးကျစ်တာ စတဲ့ ဆံပင်သားကို ဆွဲခြင်း၊ ဖိထားခြင်းတွေကြောင့်လည်း ဆံပင်ကျွတ်ရတတ်ပါတယ်။
ဆံပင်သားဟာ ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ အပူထိတွေ့မှုများလေလေ၊ ကျွတ်နှုန်းများလေလေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဆံပင်ဖြောင့်စက်၊ လေမှုတ်စက်စတာတွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းပါတဲ့ ဆံပင်သုံး ပစ္စည်းတွေကို အလွန်ပင်သုံးစွဲခြင်းကို အထူးပင် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါကြောင့်ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဆံပင်ပုံစံနှင့်အရောင်များကို ပြောင်းလဲဖန်တည်းသည့် အမျိုးသမီးများတွင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ပါးလာခြင်းအပြင် မိမိနှင့်သုံးစွဲသည့် ဓာတုအသုံးပြု့ ဆေးများကြောင့်ပင် ဦးခေါင်းအရေပြား ပျက်ဆီးစေပါတယ် ။ထိုကြောင့် ဦးခေါင်းအရေပြားတွင် အနာများပေါက်လာပြီးနောက်တစ်ချို့ ဆိုလျှင် ကုသမှု့ ကိုပင် အထူးအလေးထားပေးရသည့်ကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ် ။
သဘာဝလွန်အလှများကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ ပင်ကိုယ်အလှများဖြင့် လှနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါတော့သည် ။
MOTAA Horo Myanmar V1.0 For Android
မြန်မာဇာတာခွင်တွေ တွက်ချက်နိုင် ၊ ဇာတာခွင်တွေဖွဲ့နိုင်တဲ့ မြန်မာ Android ဖုန်း Application လေးပါ။ ဇာတာတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ fuction တွေတော်တော်လေးကိုစုံလင်လှပတဲ့ မြန်မာဗေဒင် application လေးဖြစ်ပါတယ် ။ MOTAA Horo Myanmar v1.0 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တိမ်းရှောင်လာသော ဘင်္ဂါလီ အများအပြားကို လက်ခံထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထပ်မံရောက်ရှိလာမည့် ဘင်္ဂါလီများကို ထပ်မံလက်ခံနိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက သြဂုတ် ၂၉ ရက်က ပြောဆိုလိုက်သည်ဟု The Daily Star ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dipu Moni က ထိုအကြောင်းကို ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးအတွက် နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ မကြာသေးမီက သွားရောက်အပြီးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးက သူ့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီများကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေဖြင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုများကို ခံစားနေရသည့်အတွက် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ဘင်္ဂါလီဦးရေ ၃၀၀၀၀ ခန့် ခိုလှုံလျက် ရှိသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခိုလှုံဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂါလီဦးရေသည် သိန်းဂဏန်းထက် မနည်းနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ကိုယ်စားလှယ်အား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာ၏ အဖြေသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာသာ ရှိနေကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသာ ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာအဖြစ် ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရအနေဖြင့်မူ အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များကို အခြေခံ ၄ တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပညာသင်ပေးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ သင်ပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေရပ်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်း Dipu Moni က ဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ကိုယ်စားလှယ် Stir က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အနေဖြင့် ယခုလို ဒုက္ခသည်ပေါင်း များစွာကို နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်ထိ ကြာမြင့်အောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ဘင်္ဂါလီအရေး ကိစ္စသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သော လူဝင်မှုပြဿနာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုနေခဲ့သော်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကမူ ဘင်္ဂါလီ အရေးကိစ္စသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခိုးဝင်ခဲ့သူများ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။
နိုင်ငံတကာကို ဖုန်းလိုင်းကတစ်ဆင့် ဖုန်းခေါ်တယ်ဆိုတာ ဟိုတုန်းကတော့ အိပ်မက်တစ်ခုပဲဗျ။ ကြိုးဖုန်းတွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် စပြီး ပြောင်းပေးတဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ နိုင်ငံရပ်ခြား ဖုန်းပြောတယ် ဆိုတာကို တော်တော်တန်တန် လူသိလာတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသုံးမများဘူး။ ကုမ္ပဏီတစ်ချို့ကို အင်တာနက် သုံးခွင့်ပေးလိုက်တော့ အီးမေးလ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ စပြီး သိလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ gmail မရှိသေးဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေ့သမျှ မေးလ်တစ်ခုခုမှာ စာရင်းဖွင့်ပြီး သုံးရတယ်။ သိုလှောင်ခွင့် 1GB ပေးတယ် ဆိုတာက အင်မတန် ထူးတဲ့ကံ။ အီးမေးလ်ရှိတော့ နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း တချို့နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရလာတာပေါ့။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်မှာ အိမ်သုံး အင်တာနက်တွေ စချပေးပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်မှာ gmail တွေ gtalk တွေ ပေါ်လာတော့ အရင်ကထက် စာရင် ဟန်ကျသား။ ဒါပေမယ့် အများသိကြတဲ့အတိုင်း gtalk က လူနှစ်ယောက်စလုံး အွန်လိုင်းချိတ်ထားမှ ပြောလို့ရတာဆိုတော့ အချိန်မရွေး ဖုန်းနံပါတ်လှည့်ပြီး ကောက်ခေါ်လို့ ရတဲ့ ဖုန်းလောက် အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့ ချဉ်ခြင်းကို နားလည်တဲ့ အက်တာနက် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေက အင်တာနက်ပေါ်ကတစ်ဆင့် တစ်ဘက်က ဖုန်းကို လှမ်းခေါ်နိုင်တဲ့ အင်တာနက်ဖုန်းစနစ် (VOIP = Voice Over Internet Protocol) ကို ထွင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ဆီမှာတော့ ဒီစနစ်က အတော်လေး အဆင်ပြေတယ်။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖို့က ဖုန်းဆက်ခ ကြိုတင် ငွေသွင်းဖို့ အဆင်မပြေတော့ သုံးလို့ မရပါဘူး။ စင်ကာပူ အဆက်အသွယ် ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ Pfingo တို့ Skype တို့ကို ငွေလှမ်းသွင်းခိုင်းပြီး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု အနေနဲ့ လုပ်စားခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ နိုင်ငံခြား ဖုန်းပြောခထက်စာရင် အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ဖုန်းပြောခဟာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းမက သက်သာလေတော့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လူတွေက တရုန်းရုန်း၊ တရားမဝင် အင်တာနက် ဖုန်းပြောရင် ဖမ်းမယ်ဆီးမယ်နဲ့ အသံတွေက တညံညံ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ဖမ်းမယ်ဆီးမယ် ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီအသံတွေဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လောက်ထိ ရှိနေခဲ့တယ် မှတ်တယ်။ ၂၀၁၂ ထဲ ရောက်တော့ ဆက်သွယ်ရေးက မူပြောင်းပြီး အင်တာနက်ဖုန်းတွေကို လိုက်ပိတ်မယ့် အစား၊ ဖုန်းဆက်သွယ်မှုတွေကို ဖမ်းဆီးမယ့်အစား အဲ့ဒီစနစ်တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းခြင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ် အင်တာနက်ဖုန်း စနစ်ကို ထောင်ရင်ကောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးလာတယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ကူးအရ ပေါ်လာတဲ့ အင်တာနက်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှု နှစ်မျိုးက Ytalk နဲ့ MEB TALK2 တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှု နှစ်မျိုးထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို သုံးပြီး အင်တာနက်ဖုန်း ပြောဆိုနိုင်ကြပါပြီ။ ဈေးနှုန်းအရ ဆိုရင် MAB TALK2 က ပိုပြီး သက်သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အင်တာနက်ဖုန်း စစ်စစ်ပါ။ အင်တာနက်လိုင်း မရှိရင် ဖုန်းပြောလို့ မရပါဘူး။ Ytalk က ဈေးနှုန်း ပိုများပေမယ့် အင်တာနက်လိုင်း ရှိရှိ၊ မရှိရှိ အင်တာနက်ဖုန်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုးဖုန်းတွေပေါ်ကနေလည်း ပြောလို့ရတယ်။ ကြိုးဖုန်း ဆက်သွယ်ခ တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်နဲ့ အင်တာနက်ဖုန်း တစ်မိနစ်ပြောခ (နိုင်ငံအလိုက် ကျသင့်နှုန်း) တို့ပေါင်းပြီး ယူပါတယ်။ ကြိုက်သလောက်ပြော ကျသလောက်ရှင်း စနစ်ပါ။ အခုအချိန်မှာ လူတော်တော်များများ မိုဘိုင်းဖုန်း ကိုင်နိုင်ကြပြီ။ ငွေတစ်သောင်းသွင်းပြီး Orderdata service ဆိုတဲ့ စာလုံး ရိုက်ပို့တတ်ရင် ၃ မိနစ်အတွင်း အင်တာနက် သုံးလို့ရပြီ။ အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဆွေမျိုးရင်းချာရှိသူတွေ ပြည်တွင်းဖြစ် အင်တာနက်ဖုန်း သုံးနိုင်ကြပါပြီ။
ဈေးသက်သာတဲ့ MEB TALK2 နဲ့ အင်တာနက်ဖုန်း ဘယ်လိုပြောမလဲ ကြည့်ရအောင်။ သူက အင်တာနက်ဖုန်း စစ်စစ်ဆိုတော့ ဆော့ဖ်ဝဲ လိုတယ်။ ပထမဆုံး ကိုယ့်ဖုန်းမှာ အင်တာနက်လိုင်း ချိတ်သုံးလို့ရအောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။ ပြီးရင် Browser တစ်ခုခု ဖွင့်ပြီး (အလုပ်လုပ်တာ မြန်တဲ့ Opera mini ဒါမှမဟုတ် Boat Browser တို့က သင့်တော်ပါတယ်) address ရိုက်ထည့်ရမယ့် ကွက်လပ်မှာ www.mebtalk2.com ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Go ကို နှိပ်ပါ။ MEB TALK2 ရဲ့ Home Page ကို ရောက်လာပါမယ်။ Account အသစ် ဖွင့်မှာမို့ Create Account Register နေရာကို နှိပ်ပါမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် Account Registeration Form ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာကြီး ပေါ်လာပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖောင်ဖြည့်သွင်းရမယ့် နေရာပေါ့ ဖောင်ထဲမှာ username, password နဲ့ Comfirm password အကွက်တွေကို မဖြစ်မနေ ဖြည့်သွင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အီးမေးလ်က ကိုယ့် password မေ့သွားရင် ပြန်ပြီး တောင်းနိုင်အောင် ဖြည့်သွင်းသင့်တယ်လို့ website က အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီးမေးလ်လိပ်စာရှိရင် ဖြည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ဘက်မှာ တွေ့ရတဲ့ စာလိမ်နှစ်ခုကို အသေအချာ ဖတ်ပြီး type the two words ဆိုတဲ့ အကွက်ထဲမှာ တူအောင်ဖြည့်ပေးရမယ်။ စာတွေက တစ်ခါတစ်ရံမှာ အတော်လေး ကောက်ကွေးနေတာမို့ အသေအချာ မမြင်ရရင် မြင်ကွင်းကို အကြီးချဲ့ပြီး ကြည့်ပါ။ သုံးခါထက် ပိုမှားလို့တော့ မကောင်းပါဘူး။ အားလုံးပြီးပြီဆိုရင် အောက်ဘက်က Register ဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ အားလုံး အောင်မြင်တယ်ဆိုရင် Your Account is successfully registered ဆိုတဲ့ စာတမ်းနဲ့ အကွက်တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီစာတမ်းအောက်မှာ ဖောင်ဖြည့်သွင်းတုန်းက ကိုယ်ထည့်ခဲ့တဲ့ Username နဲ့ password ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒါက Account ဖွင့်ထားတာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပြီးရင် Meb talk2.apk ဖိုင်ကို ဖုန်းထဲ download ဆွဲချရပါဦးမယ်။ ပြီးရင် Install ဖိုင်ကို လက်နဲ့ တစ်ချက်ခေါက်ပါ။ အောက်မှာမြင်ရတဲ့ Install နေရာမှာ တစ်ချက်ခေါက်ပါ။ ပြီးပြီဆိုရင် အမှန်ခြစ်လေးနဲ့ application installed စာသားကို မြင်ရပါမယ်။ အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ open ကိုနှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ Log in ဝင်ရမယ့်နေရာ တစ်နည်းပြောရရင် ကိုယ့် Account ရဲ့ user name နဲ့ password ဖြည့်ရမယ့် နေရာကို ရောက်ပါမယ်။ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ မှန်တယ်ဆိုရင် Log in wasasuccess ဆိုတဲ့ စာတန်းလေး ပေါ်လာပြီး ဖုန်းဆက်လို့ရမယ့် နေရာကို ရောက်သွားပါမယ်။ Call ဆိုတဲ့နေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းဆက်ဖို့ ဂဏန်းပါတဲ့ အကွက်ကြီးပေါ်လာပါမယ်။ ကိုယ်ဆက်မယ့် နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံကုတ်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ပြီးခေါ်နိုင်ပါတယ်။ VOIP Call နေရာကနေ ခေါ်ရမှာပါ။ အဲဒီထဲကနေ ပြည်တွင်းဖုန်းတွေခေါ်ဖို့ Local Access ဆိုတဲ့နေရာကလည်း ပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြည်တွင်းဖုန်းခေါ်ခနဲ့ ဖြတ်မှာပါ။ ကိုယ့် Account ကို verify လုပ်ချင်ရင် setting ကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းကျသွားပြီး Website ကနေ သူ့ဆီခေါ်တဲ့ဖုန်းကို ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ်။ viber မှာ ဂဏန်းလေးလုံး ပေးသလိုပါပဲ။ ရပြီဆိုရင် OK နှိပ်ပါ။ success ဆိုတဲ့ စာတမ်းနဲ့ အကွက်တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ OK နှိပ်ပြီးထွက်ပါ။ သတင်းအချက်အလက် စုံစမ်းချင်တဲ့ လူတွေက [email protected] ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Ytalk ကတော့ ကြိုးဖုန်းကရော၊ မိုဘိုင်းဖုန်းကနေပါ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအဆင့်က Ytalk ရုံးစိုက်တဲ့နေရာ (ဆင်မလိုက် အဝေးပြေးဝင်းထဲက အဆောက်အဦမှာ မှတ်တယ်) နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။ ငွေကြိုပြီး ဖြည့်သွင်းထားပါ။ အင်တာနက်လိုင်း မရှိတဲ့ ကြိုးဖုန်းကနေ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုလုပ်ရပါမယ်။ ကြိုးဖုန်းကနေဆိုရင် PIN နံပါတ်ကို ကြိုပြီး ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၄၄၅၅၅၅၅ ကို အရင်နှိပ်ပါ။ PIN နံပါတ် တောင်းပါမယ်။ Ytalk account pin နံပါတ်နဲ့ hash key ကို နှိပ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံခြားကို ၀၀+ နိုင်ငံကုတ်+ နိုင်ငံခြားဖုန်းနံပါတ်+ hash key ကိုနှိပ်ပြီး ဆက်ချင်တဲ့ နိုင်ငံကို တိုက်ရိုက်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတွေ အဆက်များတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံကုတ် ၀၀၆၈၊ တရုတ် ၀၀၈၆၊ ဂျပန် ၀၀၈၁၊ တောင်ကိုရီးယား ၀၀၈၂ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကနေ သုံးမယ့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကတော့ www.Ytalk.com.mm ကနေပြီး ဆော့ဖ်ဝဲကို download ဆွဲရပါမယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းပေါ်မှာ Install လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် Ytalk ဆော့ဖ်ဝဲကို ဖွင့်ပါ။ Log in နေရာကို ရောက်ပါမယ်။ ဆိုင်မှာသွားပြီး ငွေဖြည့်ကတည်းက user name, password တွေ သတ်မှတ်လိုပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ user name က မြင်နေရပါတယ်။ ကူးပြီးဖြည့်ပါ။ Pin Code နေရာမှာ ခဲခြစ်ပါ။ password ပေါ်လာပါမယ်။ ကူးပြီး Log in ရဲ့ password နေရာမှာ ဖြည့်ပါ။ Login နှိပ်ပါ။ အထဲကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် ဖုန်းခေါ်တဲ့ အကွက်ကို သုံးပြီး ၀၀+ နိုင်ငံကုတ်+ နိုင်ငံခြားဖုန်းနံပါတ်တို့ကို နှိပ်ပြီး နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံကို လှမ်းပြီး ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အသံကြည်လင် ပြတ်သားချင်ရင် ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ Menu ကို ခေါ်တင်ရမယ်။ ဖုန်းအောက်ခြေမှာ မျဉ်းကြောင်းလေးတွေ ဆင့်ထားတဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် setting ထဲဝင်ပါ။ Audio setting ကို ရွေးပါ။ အဲဒီထဲက G729 ကိုပဲ အမှန်ခြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ CODEC တွေကို ဖြုတ်ပေးရပါမယ်။ အင်တာနက်လိုင်းအား 30 kbps လောက် ပုံမှန်ရနေတဲ့အချိန်မှာ Ytalk ရော MEB TALK2ပါ ကြည်လင် ပြတ်သားပါတယ်။ လိုင်းအားကျပြီဆိုရင် Ytalk က ပိုပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတာ တွေ့ရပါတယ်။
စမုန်စပါးစေ့ဟာလည်း ပျို့အန်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ စမုန်စပါးစေ့ကို ရေနွေးနဲ့ ဖျော်သောက်စရာ မလိုပါဘူး။ ပလတ်စတစ် အိတ်ထဲထည့်ပြီး သွားလေရာတစ်ပါတည်း ယူသွားကာ မကြာခဏ ဝါးစားပေးပါ။
စမုန်စပါးစေ့ဟာ ကလေးနို့တိုက် မိခင်တွေ အတွက်လည်း နို့ထွက်အား ကောင်းစေပါတယ်။
သင့်ညာလက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ညှပ်ရိုးနှစ်ခုကြားမှာ ထားပြီး ညာဘက်ညှပ်ရိုး ထိပ်အလုံးကို အသာအယာ ဖိအားပေးပါ။ တစ်မိနစ်ခန့် ဖိအားပေးပါ။ ပျို့အန်ချင်တိုင်း ဖိနှိပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မနက်တိုင်း အိပ်ရာထကာစမှာ ရေတစ်ခွက်ကို ရှာလကာရည် တစ်ဇွန်းနဲ့ ရောစပ်ပြီး သောက်ပေးပါ။ ပျို့အန်တာ အမြန်သက်သာသွား နိုင်ပါတယ်။
Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲကြီး၏ တရားဝင် Vote System စက်တင်ဘာ ၂ရက် စမည်
Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့တရားဝင် Vote System စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ ၊ တနင်္လာနေ့မှာ စတင်တော့မှာဖြစ်ပါသည်။
Credit/Debit Card Payment ဖြင့် (၁၀)Votes ကို (၅)ဒေါ်လာဖြင့် ငွေချေပြီး မဲပေးနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
ပရိသတ်များ မဲပေးနိုင်သောနည်လမ်း (၃)မျိုးရှိပြီးယခင်ပေးခဲ့ခြင်းသည်လည်း အားလုံး အကျိုးရှိပါသည်။
Russian Webisite မှ ပေးမည့် Most Beautiful Woman In the World ဆုအတွက် အောက်ပါ link တွင် မဲပေးနိုင်သည်။
Missosology မှ ချီးမြှင့်သော People Choice Award အတွက်အောက်ပါ Link မှာ LIKE , SHARE နဲ့ Comment များပေးနိုင်ပါသည်.
https://www.facebook.com/telekanalont page မှ Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲကြီးကို ထုတ်လွှင့်ပြသပေးမည့်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်၍ ၄င်း pageမှကြည့်ရှု့အားပေးနိင်ကြောင်းသိရသည်။
Myanmar News Update ၏ Facebook Fan Page အား hack ခံထားရကြောင်း အသိပေး ကြေငြာခြင်း
myanmar Forward ပရိတ်သတ်များခင်ဗျား .........
Myanmar News Update ၏ Facebook Fan Page အား ၃၀-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီ ခွဲတွင် Password စတင် အချိန်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၃၁-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီခွဲ မှ စတင်ပြီး ကျနော်တင်နေသော Admin အားလုံး ဖြုတ်ချသွားပါတယ်။ မိမိ၏ Fan Page တစ်ခုလုံး Hack လုပ်ခံရပါတယ်။ ကျနော်၏ Fan Page ရရှိရန်အတွက် ပြန်လည်ကြိုးစားလျက် ရှိပါတယ်။ Facebook အဖွဲ့အစည်း သို့လည်း ပြန်လည်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နာမည်ကြီး Hacker Group များမှလည်း ကူညီလျက် ရှိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် Myanmar News Update မှာ Blog myanmarnewsupdates.blogspot.com တစ်ခုတည်းသာ ရှိတော့ပါသည်။ ယခု အချိန်တွင် ကျနော်၏ Blog တွင် Facebook Fan Page အား ဖြုတ်ချထား ပါတယ်။
သတင်းများအား Myanmar News Update တစ်ခုတည်း မှ News Feed ယူသော် လည်း အောက်မှာ တွေ့ရတဲ့ http://shwefulwar.blogspot.com ဆိုတဲ့ Blog မှ သတင်းယူထား ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
စတင် Hack လုပ်ခံရချိန် မြင်တွေ့ရပုံ
ထို့နောက် စတင်ပြီး ရခိုဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ကိုသူရိန်လှိုင်ဝင်း နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သတင်းများ အား တင်သွားကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်သည် ရခိုင်လူမျိုး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျောက်တော်နယ် ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ၏ ၀ါသနာ အလျောက် Facebook တည်ဆောက်ပြီး သတင်းများ ကူးယူဖေါ်ပြပြီးတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ နေထိုင်ပြီးသတင်းများတင် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ဖူးခြင်း မရှိပါ။ ယခုအခါ သတင်းများ ကို မလေးရှားမှတင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယခုအခါ Myanmar News Update, Eleven Media နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ကိုသူရိန်လှိုင်ဝင်း ဆိုပြီး တင်ထားပါသည်။ အခြားသတင်းများ ကိုလည်း ဆက်လက် Post လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မိမိ Fan Page အား Hack လုပ်သောသူမှာ ငွေကြေးအရသော် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ရန် သော် လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ရန်သော် လည်းကောင်း၊ မည်သည့် အတွက် ပြုလုပ် သည်ကို မိမိအနေဖြင့် မပြောတတ်တော့ပါ။ မိမိတွင် Admin Team ဟူပြီး မရှိပါ။ တစ်ဦးတည်း Admin များ ခွဲပြီး Post တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည် ရရှိခြင်း မရှိပါက အပြီးအပိုင် ဖျက်နိုင်ရေး ကြိုးစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေငြာ အပ်ပါသည်။
တစ်ခြား မီဒီယာ များမှလည်း ဒီသတင်းကို ကူးယူဖော်ပြပေးပါလို့ ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဗျာ ..
Myanmar News Updates ချစ်ပရိတ်သတ်များအားလုံး ကျေးဇူးပြုလို့ share ပေး ၊ ကူးယူဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ် ...
Myanmar News Update Blog မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by drmyochit Sunday, September 01, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကံဆိုးချက်များ Facebook မှာ ကိုယ်မသိတဲ့သူနဲ့ နာမည်ကြီး Celebrity တွေဆီကို စာ (Message) ပို့မယ် ဆိုရင် ဗြိတိန်ပေါင် ၁၀နဲ့ ညီမျှတဲ့ တန်ဖိုးကို ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံအဆိုး ဆုံး ကတော့ ဗြိတိန်ပါ။ ဗြိတိန်မှာ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတောင်စနေပါပြီ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆို မနည်းပါဘူး။ ဒါတောင် ဗြိတိန်ပေါင် ၁၀ ဒေါ်လာက အခြေခံတန်ဖိုးပဲ ရှိပါသေး တယ်။ Fan ၁.၃၄ သန်း ကျော်တဲ့ သူတွေဆီကိုပို့မယ်ဆိုရင် ၁၀.၆၈ ဗြိတိန်ပေါင် အထက်မှာ ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ စမ်းသပ် လို့အောင်မြင်ပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံမှာ စတင်အသုံးပြုတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Message ရိုက်ပြီး စာပို့ခါနီးဆိုရင် ဘယ် Payment စနစ်နဲ့ ငွေချဲမလဲ ဆိုတဲ့ Pop up window က ပေါ် လာတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမှ Paypal, Master Card အစရှိသဖြင့်တို့ကို ရွေးချယ်ပြီး မိမိ အကောင့် ထဲက ငွေကိုတွေ ထုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို အတော်များများက လက်မခံကြပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Cyber bulling နဲ့ အကောင့် လုံခြုံရေး အတွက်လို့ ဆိုပါတယ်။ Message ကို ပို့ချင်တိုင်းပို့ခွင့်ပေးထားတော့ နာမည်ကြီး လူပုဂ္ဂိုလ် သို့ ရောက်သော စာ နဲ့ မသိမကျွမ်းပဲ စာလာလာပို့သော သူစိမ်းများကြောင်း စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်ရတာမျိုးတို့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Mutual Friend ရှိနေလဲ Friend list ထဲမှာ မရှိရင် ပိုက်ဆံ ပေးရမယ်လို့တောင် ဆိုပါတယ်။
ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံကိုလည်း ဘယ်သူမှမရပါဘူး။ Facebook က ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီကို သူစိမ်း တစ်ယောက် က စာပို့ရင် ကိုယ့်အတွက်သူ ၁၅ ဒေါ်လာကုန်ထားပေမယ့် ယင်း ၁၅ ဒေါ်လာကို ကိုယ်မရ ပါဘူး။ Facebook ရဲ့  ဝင်ငွေတစ်ခုအဖြစ် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook တည်ထောင်သူ ဇူကာဘတ်ဆီကိုလည်း အလကားပို့လို့ မရ တော့ပါဘူး။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆ ဒေါ်လာ မကတောင် ပေး ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်တော့ ကောင်းပါတယ်။ သုို့ပေမယ့် မကောင်း တာကလည်း တွဲပါနေတော့ ဝေဖန်သူများနေပါပြီ။
နောက်ဆို Comment ပေးတာတောင် ပိုက်ဆံပေးမှ ပေးလို့ရတာမျိုး၊ Post သွားတင်တာတောင် ပိုက်ဆံပေး မှ တင်ခွင့်ရှိ တာမျိုးတို့ကို ပါ ပြုလုပ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ ငွေကောက်ခံမှု စနစ်ကြောင့် Google Plus နှင့် Twitter ဘက်ကိုသာ User အရေအတွက် ပိုမို တိုးလာ နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ဝေဖန် ခန့်မှန်းလျက် ရှိကြကြောင်း သိရပါတယ်။
Ref: The Sunday Times
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် စက်တင်ဘာလဆန်း ရေဒီယိုမိန့်ခွန်း နားထောင်ရန် (Youtube)
Posted by drmyochit Sunday, September 01, 2013, under သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်း | No comments
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာ၍ ရဲအင်အားကို ကျူးလွန်သူများ အင်အားထက် သာလွန်အောင် အသုံးပြု၍ ဖမ်းဆီးမည်
ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည့် အခင်းဖြစ်ပွားရာ လေးထောင့်ကန်လမ်းနှင့် ပင်ရွှေညောင် လမ်းထောင့်နေရာအား တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယခုနှစ်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရာတွင် အချို့ ကျူးလွန် သူများက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သဖြင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည့်အပြင် ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီး ပါက ၎င်းတို့ထက် သာလွန်သည့် အင်အားတို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ် ၃၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး က ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး ၀င်းကြည်က "အခုနှစ်ပိုင်း မှာဆိုရင် ရဲတွေကို ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ သူတွေက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတာ မကြာ ခဏ ဆိုသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ကျူးလွန် သူတွေရဲ့ အင်အားထက် ပိုများတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားကို တိုးပြီးတော့ ဖမ်းဆီးသွားမယ်။ တိုက်ခိုက်တဲ့ သူတွေ ကိုလည်း မူလပြစ်ဒဏ်အပြင် ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်မှုနဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့ ပြစ်မှုအပေါ် မူ တည်ပြီးတော့ ထပ်မံအရေးယူ သွားပါမယ်" ဟု သြဂုတ် ၃၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၈ ရက် ညပိုင်းက မတ်တူးငွေမှင်ရောင်ကားကို မောင်းနှင်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးက ညဘက် ယာဉ် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ခြေထောက်ဖြင့်ကန်၊ လက်သီးဖြင့်ထိုးကာ ဒုရဲအုပ် တစ်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် သြဂုတ် ၂၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ယာဉ်လိုင်းအမှတ် ၁၈၇ ခရီးသည် တင် ယာဉ်တစ်စီး၏ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူက ၎င်း၏ကားကို ချလန်ဖြတ် အရေးယူမှုကြောင့် မကျေ မနပ်ဖြစ် ကာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဆက် လက်၍ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ၀င်းကြည်က "ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ သူတွေကို ဖမ်းဆီးတဲ့ အခါ အသာတကြည် အဖမ်းခံဖို့ လိုတယ်။ ဖမ်းတဲ့သူကို စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်လို့ မရအောင် ဟန့်တားလာတဲ့ အပိုင်းကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယမှာ အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှု တရားစီရင်ချိန် တရားရုံးအပြင်မှာစောင့်နေသော သတင်းထောက်များ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တော်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့မှုနဲ့ ဆယ်ကျော် သက်တစ်ယောက်ကို တရားရုံးက အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
မုဒိန်းအကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အတွက် မုဒိန်းမှု၊ လူသတ်မှု တို့နဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီပြစ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ချိန်မှာ အသက် ၁၇ နှစ်ပဲ ရှိသေး တဲ့လူငယ်ကို အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ အသက် ၁၈ နှစ် ရှိနေပြီတဲ့ အဲဒီလူငယ်ကို ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကာလတွေ ကိုလည်း ပြစ်ဒဏ်ကာလအဖြစ်နဲ့ ထည့်တွက် ပါတယ်။
သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ မိသားစုတွေကတော့ အဲဒီဆယ်ကျော်သက်ကို သူကျူး လွန်ခဲ့ တဲ့ ပြစ်မှုနဲ့တန်အောင်လို့ သေဒဏ်အပြစ်ပေးအောင် တရားရုံးကို တိုက်တွန်း ခဲ့ပါ တယ်။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှုနဲ့နှိုင်း စာရင် နည်းလွန်းတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလ တုန်းက အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူဟာ လူ ၆ ယောက်ရဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်တာ ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ အတွင်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။
အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခံထားရတယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ ကျန်အမျိုးသားလေးယောက်ကိုလည်း အထူး တရားရုံးတွေ မှာ စစ်ဆေးနေပြီးတော့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ တွေ့ရှိရင် သေဒဏ်အထိ ကျခံကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အုပ်စုထဲမှာ ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ မတ်လတုန်းက အချုပ်ခန်းထဲမှာ သေဆုံး ခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်မှုကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တဝှမ်းမှာတင်မကဘဲ နိုင်ငံတကာမှာပါ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။
Myanmar Newsweek ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်သမား သုံးဦးကို မြိတ်ကျွန်းစု၌ ဖမ်းဆီးရမိဟူသော သတင်းဓာတ်ပုံတွင် ဖော်ပြခံခဲ့ရသည့် ကာယကံရှင်က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) သို့ တိုင်ကြားထား
သြဂုတ် ၂၇ ရက်က ဖြန့်ချိခဲ့သော Myanmar Newsweek ဂျာနယ်၏ အထူးအချပ်ပို (ဏ) ပြည်တွင်း သတင်း ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် "အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲရေးသမား သုံးဦးကို မြိတ်ကျွန်းစု၌ ဖမ်းဆီးရမိ" ဆိုသော ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ သတင်းဓာတ်ပုံတွင် အကြမ်းဖက်သမား သုံးဦးနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရသည့် ကာယကံရှင် က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)သို့ တိုင်ကြား ထားကြောင်း ကာယကံရှင်ဖြစ်သူ ကိုသီဟန်က The Daily Eleven သို့ သြဂုတ် ၃၁ ရက်က ပြောကြား သည်။
"ကျွန်တော့်ပုံကို အကြမ်းဖက်သမားဆိုပြီး ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် သမ္မတရုံး အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ် ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)ကို တိုင်ကြားထားပါတယ်" ဟု ကိုသီဟန်က ဆိုသည်။
ယင်းသတင်းဓာတ်ပုံမှာ လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်သည့် Facebook စာမျက်နှာများ တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို Myanmar Newsweek ဂျာနယ်မှ သေချာမဆန်းစစ်ဘဲ ဂျာနယ် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြ အသုံးပြု ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ယူဆရမိသည်ဟုလည်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
"အွန်လိုင်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံကို အယ်ဒီတာတွေက မရေရာမသေချာဘဲ ဒီလိုပရင့် စာမျက်နှာပေါ်မှာ သုံးလိုက်တဲ့အတွက် အရမ်းစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖော်ပြတဲ့ သတင်းကလည်း သာမန်သတင်း မဟုတ်ဘူးလေ" ဟု ကိုသီဟန်က ဆိုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ သတင်းဓာတ်ပုံဖော်ပြခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းပေးရန် အဆိုပါ Myanmar Newsweek ဂျာနယ်တိုက်သို့ ၎င်း၏ရှေ့နေမှ တစ်ဆင့်ပြောထားပြီး ဂျာနယ် တိုက်ဘက်မှ ပြေ လည်အောင် ဖြေရှင်းပေး မည်ဟု ပြန်ပြောခဲ့သည်ဟု ကိုသီဟန်က ဆိုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဂျာနယ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် သတင်းဖော်ပြခံရပြီးနောက်တွင် ၎င်း၏ လူမှု ဘ၀မှာ လုံခြုံမှု မရှိသကဲ့သို့ ခံစားရပြီး လက်ရှိတွင် အလုပ်မှ ခွင့်ယူထားရပြီး အဆိုပါ သတင်းဓာတ်ပုံနှင့် ပတ် သက်ပြီး ဖြေရှင်းနေ ရကြောင်းလည်း ၎င်းကပြောကြားသည်။ "ခုဆိုရင် ကျွန်တော့်မှာ လုံခြုံမှုမရှိသလို ခံစားနေ ရတယ်။ အလုပ်ကလည်း ခွင့်ယူ ထား ရတယ်။ လာသမျှ ဖုန်းတွေလည်း ဒိုင်ခံဖြေရှင်း နေရတယ်" ဟု ဆိုသည်။
Myanmar Newsweek ဂျာနယ်ဘက်မှ အဆိုပါကိစ္စအား ပြန်လည်တောင်းပန်ခြင်း မပြု ပါက ရှေ့နေမှ တဆင့် ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကာယကံရှင်က သြဂုတ် ၃၁ ရက် ညနေပိုင်းက The Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
Myanmar Newsweek ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဘုန်းကျော်က "အမှန်က ဒီသတင်း ဓာတ်ပုံကို ဖြုတ်ခိုင်း ထားပြီးသားပါ။ Layout သမားတွေ ပေါ့လျော့သွားလို့ ပါသွား တာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်အပတ်ထွက်မယ့်ဂျာနယ်မှာတောင်းပန်ကြောင်း ထည့်ပေးမှာပါ။ တောင်းပန် ဖို့လည်း အဆက်အသွယ် လုပ်နေပါတယ်။ အဆက်အသွယ် မရသေးဘူး" ဟု သြဂုတ် ၃၁ ရက် ညနေ ၆ နာရီက The Daily Eleven သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေဘက်က တော်လှန်နေတဲ့ သူပုန်တပ်တွေကို အနိုင်ရနေ တဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားကနေ စစ်ရေးနဲ့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မယ်ဆိုရင် လုံးဝ အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သမ္မတပူတင်က ဒီကနေ့ စနေနေ့မှာ ပြောလိုက်တာပါ။ ဒီကနေ့ ဆီးရီးယားကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးမှူးတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာကို စောင့်ဖို့အတွက်လည်း အမေရိကန်ကို Russia သမ္မတက တိုက်တွန်းပါတယ်။
အမေရိကန်ရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှုးတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြပါလို့ ဆိုပါတယ်။ အခု
နယူးယောက်ခ် မြို့ဆီ ပြန်လာနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးမှူးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဆီကို တင်ပြ မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးရီးယားအစိုးရဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ညွှန်ပြနေတဲ့ အစီရင်စာတခုအပေါ်မှာ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး အသိုင်းအဝိုင်းက အတော့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry က သောကြာနေ့က ပြောခဲ့ပါတယ်။ အများပြည်သူ သိအောင် ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ Damascus မြို့နားက ဆီးရီးယား ၁ ထောင် ၄ ရာကျော် ဓာတုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး အဲဒီထဲမှာ ကလေး ၄၂၆ ယောက်ပါဝင် တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆီးရီးယားအစိုးရရဲ့ ဓာတုလက်နက်အဖွဲ့ဟာ အဲဒီလို တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင် ၃ ရက်အလိုမှာ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ဒေသကိုရောက်နေ တာ တွေ့ရတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kerry ကပြောပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပြင် လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်
တွေနဲ့ မဟာမိတ်တွေနဲ့ ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးတွေလုပ်နေတဲ့ သမ္မတ Barack Obama ကတော့အကန့်အသတ် ဆောင်တဲ့ အရေးယူတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင်။
ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်း အကြောင်း
ဉာဏ်စမ်းက အဖြေမှန်တွေပါ ... ။
၁။ (C) သန္ဓေအောင်သည့်အချိန်
၂။ (A) သန္ဓေအောင်ပြီး (၂၁)ရက်
၃။ (D) အထက်ပါအချက်များအားလုံး
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများမှာ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအပြင် သားအိမ်ပေါက်ခြင်း (uterine perforation) ၊ သွေးဆိပ်တက်ခြင်း (endotoxic shock) ၊ သားအိမ်ခေါင်း စုတ်ပြဲခြင်း (cervical laceration) ၊ သားအိမ်ကွဲခြင်း (uterine rupture) နှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း (death) စသည်တို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။
၄။ (A) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ၈ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်ကြား
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းများ၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၃ ပတ်မှ ၁၅ ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၆ ပတ်မှ ၂၀ ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ရက်သတ္တပတ် ၂၀ နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
၅။ (A) မှန်
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းများ၏ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၂၅ နှစ်အောက် အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပေါ် သည်။ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။
၆။ (B) မှား
အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း/ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိသည်။
၇။ (A) မှန်
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းပြုလုပ်သော အမျိုးသမီးသည် သာမန်အမျိုးသမီးထက် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ရန် အခွင့် အရေး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်၌ အမျိုးသမီး၏ ရင်သားဆဲလ်များအတွင်း ဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုး ကြီးထွားမှုသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းင်းဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးကြီး ထွားမှုသည် ကလေးမွေးသောအခါမှ ရပ်တန့်သွားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ လိုက်သောအခါ ရင်သားဆဲလ်များ ဖွံ့ဖြိုးကြီး ထွားမှုကို မရပ်တန့်စေဘဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးကင်ဆာဖြစ် ဖို့ အခွင့်အရေးများလာပါသည်။
၈။ (A) မှန်
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ပြုလုပ်မိသော အမျိုးသမီးသည် မိမိကိုယ်ကို အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော စိတ်ဒဏ်ရာကို ခံစား ရလေ့ရှိသည်။ မိခင်သာမက ဖခင်၌ပင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းအတွက် စိတ်ထိခိုက် ဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Next Launcher 3D v2.0 Build 90 Apk 10MB
8လပိုင်း 30 ရက်နေ့ ထွက်Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အောင်လံ မြို့နယ် လူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်အာ...
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု လွှတ်တော်သို့လွှဲမည်ကို ကေအင်န်...
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် အချက်အလက်များ မှတ်...
Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲကြီး၏ တရားဝင် Vot...
Myanmar News Update ၏ Facebook Fan Page အား hack ခ...
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် စက်တင်ဘာလဆန်း ရေဒီယိုမိန့်ခွန...
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်ခို...
အိန္ဒိယမှာ အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်သူတဦးကို ပြစ်ဒဏ်စ...
Myanmar Newsweek ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အကြမ်းဖက...